Ufuna Indlela Bhala ileta eya kumhleli uphawula iingxaki ezitalatweni kunye neendlela abafumana nokuloga amanzi ngexesha zemvula? thina apha iLeta ukuba umhleli ngeengxaki ukungena kwamanzi ngexesha zemvula kwizixeko metro ezifana Delhi na.
15 EyeNkanga 2017
Isihloko- Ukuqaqambisa iingxaki ukungena kwamanzi Delhi ngexesha zemvula
Ngenxa kwiphephandaba lakho axabisekileyo Ndifuna ukutsala ingqalelo abasemagunyeni inkxalabo malunga ingxaki ukungena kwamanzi Delhi ngexesha zonke zemvula.
Yaba kancinane engaqhelekanga ukubona iindawo ezitalatweni kunye neendlela ezininzi e Delhi kokuba amanzi nje emva kweeyure ezimbalwa wemvula ngakanye kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo. Oku kubonisa yingxaki enkulu kunye nenkqubo yokukhupha amanzi kulo mzi. Delhi ufumana imvula efana nale kuphela iiveki ezimbalwa ngonyaka ngexesha nyanga zonke. Kodwa ke isixeko nako ukumelana nayo. Le meko yaba mbi ngakumbi phezu kwiindlela ngezantsi ezinye flyovers. Abaqhubi abaninzi kwafuneka bashiye iimoto zabo emva kokuba berhaxwa lidike elinamanzi. Zokuxinana kwamanzi ibhekisa Ukwanda idibene namanzi. Xa iindlela ezintsha ezakhiwayo, ingakumbi iindawo ezomileyo ezisezantsi zogqunyelelwe, kubalulekile ukuba inkqubo efanelekileyo yokukhupha amanzi lufakwa endaweni ukuze amanzi ngokukhawuleza amanzi xa imvula. Njengoko kokuba ingqukuva of India, kuyinto gaka ukubona iindlela ayenamandla emva kokuba ehlaselwe imvula.
Nyaka ngamnye iimvula ezinkulu ukwenza ezinye iindawo zesixeko baphathwe zokuxinana kwamanzi. Umuncu emvula, xa ekhona onke, Ayanelanga ukuba isiqinisekiso kutsalwe amanzi ukuze kwizitalato iindawo ezomileyo ezisezantsi zogqunyelelwe ba- uphuphuma. Iindlela vinjwa ezikhokelela kwemikrozo yeemoto, beemoto ukuba bawele bedlula kwizitrato amanzi futhi ngakumbi abahluphekayo ezidolophini, abahlala ematyotyombeni okanye elawo ziye amakhaya abo badla yayonakaliswe amanzi, leyo kungathatha iintsuku ezininzi athothe. Kodwa zokuxinana kwamanzi kwenzeka yonke indawo, enoba usisityebi okanye kwiindawo ezihluphekayo. ingxelo yemozulu wephephandaba komnyaka iminyaka yonke bayaziswa umhla ngqo xa kulindeleke imvula ukuqalisa kwaye ingaba zemvula izise ngaphezulu okanye ngaphantsi imvula ngaphezu kwiminyaka engaphambili nangona ukuba abasemagunyeni abachaphazelekayo ayiphumelelanga ukuba bayilawule le meko.
MCD wethu izibonelelo ngokwaneleyo ukuba bayilawule le meko, kodwa umgqomo engafanelekanga kwenkunkuma luluntu ukungaphumeleli MCD yenye yezizathu ezenze ukuba kwemijelo wahlulwayo uxakwe inkunkuma okwenza kukhule ukungena kwamanzi. Ngenxa yokuba zokuxinana kwamanzi abantu kufuneka ukujamelana ezininzi neengxaki ezifana iingozi ezindleleni ubangela nokufa maxa wambi, Ukubambeka kwetrafikhi, ukwandisa iingcongconi njalo kwi. Sinethemba lokuba Authority yeMisebenzi yoLuntu iza kuthatha ingxaki ukungena kwamanzi kakhulu nokwamkela iindlela ezintsha kunye amanyathelo okuthintela iingxaki okunjalo kwixa elizayo.
« Top 8 Career Options nge Imivuzo Ndiyeke in India
Usuku lwabanesifo somdlavuza – EtiMnga 1, 2017 : isincoko, Theme, ezigxeka, Quotes, imiyalezo, Indlela Bhiyozela, Speech »